Disney | Telenor Myanmar
တယ်လီနောမှ မြန်မာ့ပထမဦးဆုံးအဖြစ် ကမ္ဘာကျော် Disney ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ယူဆောင်လာပါပြီ။
Disney ရဲ့ D.Magic portal ဆိုတာကတော့ Disney မှ ရာနဲ့ချီတဲ့ အလန်းစား premium content များကို download ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ့် mobile content platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး Disney Game များ၊ app များ၊ e-book များနဲ့ အခြားသော contentများကို တယ်လီနောအသုံးပြုသူများ ရယူနိုင်ပါပြီ။
ထိပ်တန်း application အခု ၄၀ကျော်
Pixar, Frozen, Star Wars နဲ့ Marvel တို့အပါအဝင် အခြား Disney အမှတ်တံဆိပ် များစွာ
Android OS အတွက် အပြည့်အဝ support ရှိခြင်း
e-Book ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်
ပုံပြင် ရုပ်ပြနဲ့ e-Books များစွာ ပါဝင်ခြင်း
သင့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံး ဇာတ်လမ်းများ ကို စာအနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ audio book အနေဖြင့်လည်းကောင်း ရရှိနိုင်ခြင်း။
လူငယ်လူရွယ် စာပေလေ့လာသူများအတွက် ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ထူးခြားသောကဏ္ဏများ ပါဝင်ခြင်း
wallpaper အမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ကျော် download ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
သင်အနှစ်သက်ဆုံး အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ Live wallpaper များရယူနိုင်ခြင်း
အမိုက်စား Android game ပေါင်း ၄၀ကျော်
Club Penguin, Mickey & Friends, Frozen, Cars, Toy Story, Star wars နဲ့ အခြား disney အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းများစွာ
Online Game များကို Portal ပေါ်တွင် ကစားနိုင်ခြင်း
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကာ D.Magic Portal ဝန်ဆောင်မှူကို ရယူလိုက်ပါ။ ရယူရန်
၁. service homepage တွင်ရှိသော D. Magic တွင် ပါဝင်ရန် နှိပ်ပါ
၂. Join Now ကို နှိပ်ပါ
၃. Confirm ကို နှိပ်ပါ
၄. အောင်မြင်စွာ စာရင်း ပေးသွင်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်
၅. အောင်မြင်ကြောင်း sms
ဒစ်စနေးပေါ်တယ်အတွက်အခကြေး ငွေပေးချေ နိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ကို တယ်လီနော မြန်မာလီမိတက် ၏ ပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် စားသုံးသူများ အတွက် ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။ ဒစ်စနေးလ် ၏ ၀န်ဆောင်မှုများ ကို မူ တယ်လီနော မှ ပေးအပ်နေခြင်း မဟုတ်ဘဲ စားသုံးသူများ အနေ ဖြင့် ဒစ်စနေးလ်ထံမှ တိုက်ရိုက် စာရင်းပေးရယူကာ ကြည့်ရှု့ခံစားနိုင်ပါမည်။ ဒစ်စနေးလ် မက်ဂျစ်ပေါ်တယ်လ် ၏သုံးစွဲသူများ အတွက် စည်းကမ်းနှင့် အချက်အလက်များ မှာ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲ ခြင်း၊ တိုး မြှင့် သတ်မှတ်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပြီး ထို ကိစ္စများ အတွက် တယ်လီနော မြန်မာ လီမိတက်မှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းသွား မည် မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ အချက်အလက် နှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက် များ ကို http://tmm.8elements.mobi/Terms တွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့ နိုင်ပါသည်။
တကယ့်Disney portal အစစ်လား။
Disney ဝက်ဆိုဒ် ဆိုတာမှန်ကန်ပါတယ်။ Disney ရဲ့officialဝက်ဆိုဒ် ဖြစ်ပြီး Disney ရဲ့ contents တွေကိုတရားဝင် လိုင်စင်ယူထားပြီးသားမို့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်စေမှာပါ။
Disney ရဲ့ D.Magicကိုဘယ်မှာရယူနိုင်မလဲ။ ဘယ်လို access လုပ်ရမလဲ။
သင့်ရဲ့ browser ကိုဖွင့်ပြီး http://tmm.8elements.mobi/disney လို့ရိုက်ထည့်ပြီးသွားလိုက်ပါ။ အလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရအောင် link ကို bookmark လုပ်ထားဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့။
D.Magicဆိုတာmobile content portal တစ်ခုဖြစ်ပြီး contents အမျိုးအစားရာကျော်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ကာကစားလို့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး mobile content portal တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ http://tmm.8elements.mobi/disney မှာဝင်ရောက်ကာမတူညီတဲ့ brand အမျိုးအစားတွေ (ဥပမာ-PIXAR တို့လိုမျိုး)၊ မတူညီတဲ့ contents အမျိုးအစားတွေ ကိုအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ဖတ်ကြည့်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်ကစားလို့ရပါတယ်။
Contentအများစုက ၅၅၀ ကျပ် (သို့) ၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးgame wallpapersလေးတွေလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် D.Magic Club အဖွဲ့ဝင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ အပတ်စဉ်ကြေး ၄၅၀ ကျပ် သာကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီးသင့်အတွက် အပိုဆုတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်။
D.Magic Club ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းကသင့်ကိုအကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်အများကြီးရစေမှာပါ။ အပတ်တိုင်းအပိုဆုအဖြစ် content အသစ် ၄ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးသင့် downloads အဟောင်းတွေနဲ့ လဲလှယ်ကာကစားလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း discounts လည်းရအုံးမှာပါ။ membership ရဲ့အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ link မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ http://tmm.8elements.mobi/disney/d.magic
သင့်ဖုန်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းအတွင်းစနစ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Android version OS 4.0 ကစပြီး, iOS ဖုန်းတွေကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ ဂိမ်းကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ portal မှာဂိမ်းတွေမရရှိနိုင်ခြင်းဟာသိပ်ဟောင်းလွန်းတဲ့ဖုန်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းအသစ်တွေဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းကို download folder ထဲမှာအရင်ကြည့်ပါ။ တွေ့ရင် install လုပ်ပါ။ မတွေ့ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ MyAccount page ကိုသွားကြည့်ပြီးဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ပြီးရဲ့လားစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ မလုပ်ရသေးရင် ပြန်ဒေါင်းလုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် cumtomer service ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင့်ဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ်၊ OSမော်ဒယ်နဲ့ သင့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြောပြပြီးသင်ဘယ်အချိန်ကဒေါင်းလုပ်ခဲ့လည်းဆိုတာတွေကိုပြောပြအကူအညီတောင်းပါ။
D.Magicနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြီလားဆိုတာစစ်ဆေးပါ။ တခါတရံသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်အတည်ပြုခြင်းမရသေးတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Wifiကိုပိတ်လိုက်ပါ။ membership page(အသင်းဝင်စာမျက်နှာ)ကို နှိပ်လိုက်ရင် သင့်ဖုန်းနံပါတ် ထည့်သွင်းဖို့စာမျက်နှာသစ်ကိုချပေးပါမယ်။သင့်ဖုန်းဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လို့ သင့်ဖုန်းသို့ ကုတ်နံပါတ်ကိုSMSဖြင့်ပို့ပေးပါမယ်။ ဒီကုတ်ကိုဖြည့်ပြီးအတည်ပြုပေးရပါမယ်။ ဒါပြီး ENTER ကိုနှိပ်လိုက်ရင် သင်ဟာD.Magicရဲ့အဖွဲ့ဝင်အသင်းသားဖြစ်သွားပါပြီ။
Facebook page မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြည့်သွင်းရတာလဲ။
သင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မှတ်ပုံတင်အတည်ပြုချက်မရသေးရင် Disney's D.Magicနဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရနိုင်ပါဘူး။ membership page(အသင်းဝင်စာမျက်နှာ)ကို နှိပ်လိုက်ရင် သင့်ဖုန်းနံပါတ် ထည့်သွင်းဖို့စာမျက်နှာသစ်ကိုချပေးပါမယ်။သင့်ဖုန်းဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လို့ သင့်ဖုန်းသို့ ကုတ်နံပါတ်ကိုSMSဖြင့်ပို့ပေးပါမယ်။ ဒီကုတ်ကိုဖြည့်ပြီးအတည်ပြုပေးရပါမယ်။ ဒါပြီး ENTER ကိုနှိပ်လိုက်ရင် သင်ဟာDisney's D.Magicရဲ့အသင်းသားဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပြီးသား game ကိုဖွင့်လို့မရဘူး။
game ကို install လုပ်ပြီးဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင် game ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် သင့် handset ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ handset ရဲ့ storage ကိုစစ်ပါ။ ဖွင့်ထားတဲ့ app အားလုံးကိုပိတ်ပြီး game ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ ဒါမှမရသေးဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer service ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင့်ဖုန်း model, OS နဲ့ gamefileတို့ကိုပြောပြပြီးအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
Disney ရဲ့contentsတွေကိုဒေါင်းလုပ်တဲ့အပေါ် အပတ်စဉ် အပိုဆုတွေပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ MyAccount page မှာရရှိထားတဲ့ အပိုဆု contents တွေကိုစစ်ဆေးပြီးပိုကောင်းတဲ့ contents တွေနဲ့ လဲလှယ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။
Disney portal ကိုဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
ဦးစွာသင့်ဖုန်း WIFI ကိုပိတ်ပြီးသင့် mobile service network က Clup ကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ဘက်ကbanner၊ သို့မဟုတ် "join now" link, " Join the Club" ၊ ဒါမှမဟုတ် any JOINခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ လမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်သွားပါ။ ပြီးရင် JOIN NOW, SBUSCRIBE AND SAVE, YES, I WANT TO JOIN D.MAGIC စတဲ့ခလုပ်တခုခုကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးထားတဲ့ကွက်လပ်မှာဖြည့်ပါ။ အတည်ပြုကြောင်းသင့်ဖုန်းသို့ SMS ပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ Disney Club ရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဘာကြောင့် ဂိမ်းကိုရပ်ဆိုင်းရလည်းဆိုတဲ့အကြောင်းမေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ရပ်ဆိုင်းချင်ရင် သင့်ရဲ့ My Account page ကိုသွားပါ။ ပြီးရင် UNSUBCRIBE ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။Unsubscribed လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် subscribe ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ရက် ၉၀ စောင့်ရပါမယ်။
Disney က ဂိမ်းတွေကိုဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲ။
Home page မှာရှိတဲ့ Mobile Games category ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါ။ သင်နှစ်သက်ရာဂိမ်းကိုနှိပ်ပြီး on-screen လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ပြီးသင့်ဖုန်းထဲဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။ ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ install လုပ်ကာဖွင့်ပြီးကစားလို့ရပါပြီ။
http://tmm.8elements.mobi/disney ကနေDisney ကိုဝင်တဲ့အခါ error message ပြနေပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့အင်တာနက် setting ကြောင့်၊ ဒါမှမဟုတ် browser configuration ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးဆုံးသင့်ဖုန်းရဲ့ internet setting ကိုစစ်ပါ။ WEB, WAP access တွေကိုစစ်ပါ။ mobile data ကို enable လုပ်ထားပါ။ 3G, 4G settings တွေကိုစစ်ပါ။ ဖုန်းမှာ browser ကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ network operators site ကို အစမ်းဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။ သင့် mobile setting ကို ပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် moblie network operator's ၀န်ဆောင်မှုဌာနကို ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
Home page မှာ LOGIN ကိုနှိပ်ပါ။ User name, password တွေကိုထည့်ပါ။ အမှားအယွင်းရှိခဲ့ရင် နောက်တကြိမ် User name, passowrd ပြန်ထည့်ကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် support@8elements.netမှာသင့် user name နဲ့ account ကိုသုံးပြီး password ပြန်ရှာထည့်ပါ။
Password မေ့သွားရင် ကိုဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲ။
Forget Password ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် on screen ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလုပ်သွားလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့် email ကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
မရယူနိုင်ပါ။ Unsubscribe ပြုလုပ်ပြီးပါကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုများကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ရန်နှင့်စားသုံးသူများ၏သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုတို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအားထပ်မံရယူခြင်းကိုရက်၉၀ကန့်သတ်ရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပါသည်။သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါကဝန်ဆောင်မှုအားပြန်လည်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။